Chelsea Oo Ku biirtay Tartanka ay Manchester City iyo Man United Ugu Jiraan Gareth Bale
HomeSuuqaChelsea Oo Ku biirtay Tartanka ay Manchester City iyo Man United Ugu Jiraan Gareth Bale
Manchester City iyo Chelsea ayaa go’aansaday in ay kula tartamaan Manchester United laacibka orodka badan ee Gareth Bale oo la saadaalinayo in ay suurtogal tahay in ay Real Madrid iibiso marka uu furmo suuqa ciyaartooyadu xagaaga.
Cadaadis badan ayaa Bale ka saaran Madrid kadib markii uu ku guul darraystay in uu si fiican u ciyaaro toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaana dhawr jeer ku qayliyey taageereyaasha kuwaas oo ku eedeeyey in aanu garoonkaba u imanin in uu ciyaaro.
Warku waxa uu sheegay in haddii uu Bale go’aansado in uu ka tago Madrid, isla markaana ay kooxdiisa isku waafaqaan go’aanka in uu ku biiri doono kooxda Manchester United, hase yeeshee labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester City ayaa iyaguna soo bandhigay damacooda weeraryahan isbeddel ku samayn kara safkooda hore kaas oo ka caawin kara firfircooni iyo waliba in ay u baahan yihiin nin orod badan oo ka caawiya sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Champions League.
Kooxaha Ingiriiska ayaa la sheegay in haddii ay doonayaan in ay helaan laacibkan ay ku khasbanaan doonaan in ay bixiyaan £100million oo ay Real Madrid ku iibin karto ciyaartoygan iyo waliba ku dhowaad £300,000 toddobaadkiiba gunno loo siinayo Bale oo ah inta uu wakhtigan ka qaato Real Madrid.
Manchester United ayuu warku sheegayaa in haddii aanu isbeddel ku imanin qiimaha lacagtan in ay u wareegi doonto oo ay raadsan doonto ciyaartooyo kale oo ka qiimo jaban, halka ay Chelsea u aragto Bale awoodda kaliya ee ka maqan kaas oo imaanshihiisu uu ka saacidi karo in ay hanato Champions League.
Chelsea waxa kale oo ay raadinaysaa difaacyahanka Real Madrid ee Raphael Varane kaas oo uu tababare Mourinho si aad ah u aaminsan yahay.
Chelsea waxay dooneysaa in ay Varane ka bixiso £20million iyo waliba gool-haye Petr Cech oo la filayo in uu kooxda ka tegayo, hase yeeshee waxay uga faa’iidaysan kartaa in ay ku soo xero geliso Varane, iyadoo ay Real Madrid hore u tibaaxday in ay dooneyso.
Kooxaha kale ee Petr Cech doonaya wax aka mid ah Arsena, Tottenham, Liverpool, Manchester United iyo PSG
Orodyahanka reer Ethiopia ee Kenenisa Bekele Oo Ka Maqnaanaya Marathon-ka London
Saxaafadda Oo Gaadhi Ku Dhex Weerartay Ramos Hooyadii Iyo Jawaab Ka Farxisay Madrid Oo Ka Soo Yeedhay
30/06/2015 Abdiwahab Ahmed